क्यान्सरलाई जितेर मुस्कुराउँदै घर फर्किइन सोनाली ! [सर्मथकहरुमा खुःशीको सीमा रहेन] - Purbeli News
क्यान्सरलाई जितेर मुस्कुराउँदै घर फर्किइन सोनाली ! [सर्मथकहरुमा खुःशीको सीमा रहेन]
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १९, २०७५ समय: ११:४४:००
मुम्बाई । बलिउडका प्रख्यात कलाकार सोनाली बेन्ड्रे अमेरिकमा क्यान्सरको उपचारपछि घर फिर्ता भएकी छिन । उनी सोमबार विहानैं मुम्बाई आइपुगेको जनइएको छ । सोनालीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधारपछि न्युर्योकबाट मुम्बाई फर्किएको उनका श्रीमान गोल्डी बेहलले जानकारी दिएका छन । सोनालीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएको र अव थप उपचारको लागि न्युर्योक जानु नपर्ने बेहलले बताए ।
करिब छ महिनादेखि सोनाली राम्रो होस भन्ने चाहाना राख्ने सबैलाई उनी राम्रो भएको खबर गर्न चाहेको बेहलले बताए। यस अवधिमा सोनालीप्रति सबैले देखाएको माया र समर्थनको लागि बेहले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन । अव सोनालीको उपचार पूरा भएको र अव उनी पूर्णरुपमा स्वास्थ्य भएकी बेहलले बताए ।
मुम्बई फर्किएकी सोनालीले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एक भावुक स्टाटस लेखेकी छन्।सोनालीको यो स्टाटसलाई एक लाख भन्दा पनि धेरैले लाइक गरेका छन् भने १५ हजार भन्दा धेरै कमेन्ट्स छन्। मानिसहरुले सोनाली मुम्बई फर्किएकोमा भव्य स्वागत गरेका छन्। र उनको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेका छन्।
“मानिसहरु भन्छन् दूरीले मनलाई नजिक बनाउँछ। हो यस्तो हुन्छ। तर दूरीले हामीलाई जुन पाठ सिकाउँछ, त्यसलाई पनि हामीले कम आँक्नु हुँदैन। जम म आफ्नो घरभन्दा टाढा न्युयोर्क शहरमा थिएँ, तब मलाइ कति धेरै कथाकाबीच म हिँडिरहेकी छु। प्रत्येक कथा फरक कोणबाट आफ्नो च्याप्टर लेख्ने कोसिस गर्थे। ”
“त्यहाँ प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष गरिरहेका हुन्थे। तर कोही पनि मैदान छोडेर भाग्न तयार थिएनन्। अब म त्यो बाटोमा छु जहाँ मेरो मन र मुटु छ। यो एउटा यस्तो अनुभव हो जसलाई म शब्दमा बयान गर्न सक्दिन, तै पनि म कोसिस गरिरहेकी छु। यो मेरो परिवार र साथीलाई दोस्रो पटक देख्न पाउनु खुशी हो।” जनबाेलीबाट
‘मोडल हन्ट जनकपुर २०१९’को पहिलो अडिशन सम्पन्न
भीमफेदी गाइज र एलिसा शर्मा फिचर्ड किरण भुजेलको ‘रेलैमा’ सार्वजनिक [भिडियो]
शंकर थापाको’क्यालकुलेटर’मा बले र कक्रोजसँग साक्षी संग्रौला (भिडियो )
चर्चित गीत ‘कुटुमा कुटु’ गीत समाबेश फिल्म ‘२ रुपैया’ युट्युबमा सार्बजनिक (पुरा फिल्म सहित)
डेराबासीबाट चर्चामा आएका निशानको नयाँ गीत सार्वजानिक (भिडियाे सहित)
गायन क्षेत्रमा जम्दै रश्मी
यी बलिउड अभिनेताको नेपालि फिल्ममा डेब्यु गर्ने ईच्छा (भिडियो सहित)
मध्यरातमा काठमाडाैँमा बम आतंक ( ७ तस्विरहरू)
सगरमाथा क्षेत्रको ढुङ्गा ल्याउँदा…
विस्फोटमा विप्लव समूहको संलग्नता, घाइते चारको खुल्यो परिचय ( १२ तस्विरहरू सहित)